များသောအားဖြင့်ကျောင်းသားများသည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုလေ့လာရန်သို့မဟုတ်အလွတ်ကျက်ရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေအခက်အခဲကြောင့်စိတ် ၀ င်စားမှုနည်းပါးခြင်းသို့မဟုတ်အာရုံစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ယူခြင်းပြproblemsနာများကြောင့်ဖြစ်စေ။ ဒီအဘို့, ရှိပါတယ် လေ့လာမှုကျွမ်းကျင်မှု ၎င်းသည်ကျောင်းသားများကိုဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးသင်ကြားရာတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အရာကျနော်တို့ကဒီ post ကိုတလျှောက်လုံးအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
1.1.2 PSQRST နည်းလမ်းကိုသုံးပါ
1.1.6 အနက်ရောင် - အစိမ်း - အနီရောင်နည်းလမ်း
2.1 မျဉ်းသား technique ကို
2.5 ဦး နှောက်
လေ့လာမှုနည်းစနစ်များသို့မဟုတ်နည်းစနစ်များသည်တတ်နိုင်သောနည်းဗျူဟာများဖြစ်သည် သင်ယူမှုတိုးတက်လာသည် ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များတွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရန်အလွန်လိုအပ်သောနေရာများတွင်ဖြစ်သည်။ လေ့လာသုံးသပ်မည့်အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာခြင်းသို့မဟုတ်အလွတ်ကျက်ခြင်းတွင်လူတစ် ဦး ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသောမည်သည့်နည်းစနစ်သို့မဟုတ်နည်းဗျူဟာကိုမဆိုလေ့လာမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤနည်းဗျူဟာများသည်များသောအားဖြင့်အသုံးချရန်လွယ်ကူသောကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းသင်ယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ကိုနယ်ပယ်အားလုံးသို့မဟုတ်ဒေသအားလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းသို့မဟုတ်ထိုနယ်ပယ်အတွက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်တိကျသောဒေသများ၌အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူများသောအားဖြင့်ကျောင်းသားသည်စာသင်ကြားနေစဉ်အတွင်းသူ၏နည်းလမ်းများကိုကျောင်းသားအားထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဤနည်းစနစ်များအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအလေးထားလျက်ရှိသည်။ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဤခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်။ အသိပညာဆည်းပူးသောကျောင်းသားများကြောင့်ဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်; ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့အတန်းတွေကိုတက္ကသိုလ်မှာပထမလတွေမှာတောင်ထည့်သွင်းထားတယ်။
သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်လေ့လာမှုနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအချို့သည်ယေဘူယျအားဖြင့်မည်သည့်ဘာသာရပ်နှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သည်။ အခြားသူများကိုအထူးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြစဉ်။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့လက်ရှိအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြပြီး၎င်းတို့တစ်ခုစီ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှင်းပြပါမည်။
အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းနည်းစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များ၊ သင်ခန်းစာများ၊ သတင်းအချက်အလက်အညစ်အကြေး၊ ရုပ်ပုံများ၊ အတိုကောက်များ၊ စာမေးပွဲနည်းဗျူဟာများ၊ အလှည့်တွင်အချို့ကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ခွဲထားသည်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာရန်လိုအပ်သည့်နယ်ပယ်၊ ကျောင်းသား၏စွမ်းရည်များနှင့်၎င်းတို့၏ ဦး စားပေးမှုများအရအသုံးပြုနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများရှိသည်။
ဤလေ့လာမှုနည်းစနစ်များသည်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သောကြောင့်အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုလေ့လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စာဖတ်ခြင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်တတ်သည်၊ သို့သော်စာသည်ရေးသားထားသောစာသားကိုစာဖြင့်လေ့လာရန်မဟုတ်ဘဲအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်မေးခွန်းကိုမဆိုဖြေဆိုသောအခါအသုံးပြုရန်အတွက်လိုအပ်သောဗဟုသုတကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
လူအများစုက al caletre ကိုလေ့လာခြင်းသည်တစ်စုံတစ်ခုသင်ယူရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်းအမှန်တရားနှင့် ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ဗဟုသုတကိုရရှိသောအခါအကဲဖြတ်ပြီးနောက်မကြာမီမေ့သွားတတ်သည်။ ထို့အပြင်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်စာသား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုမေ့သွားသောအခါ၊ ကျန်အပိုင်းများကိုမှတ်မိရန်လည်းခက်ခဲသည်။
ဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သောအနုပညာပြproblemsနာများသည်ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်ကိုအခြေခံသောသူများသည် ပို၍ ထိရောက်သည်၊ ဤအဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုကတည်းက။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် PQRST နည်းလမ်းကို“ Preview, Question, Read, Summary and Test” ဟုခေါ်သောအင်္ဂလိပ်အတိုကောက်အားဖြင့်၎င်းကို Preview, Ask သို့မဟုတ် question, Read, Summarize and Evaluate အဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ကတ်ပြားများကိုကျောင်းသားများမှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြု၍ လက်ရှိခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤစာတွင်ပါ ၀ င်သည့်စာလုံးပေါင်းနှင့်ရေးသောမှတ်စုများပါ ၀ င်နိုင်သဖြင့်ဤနည်းလမ်းကိုဖြည့်စွက်မည့်နည်းလမ်းများကိုကျောင်းသားကရွေးချယ်သင့်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်တိကျသောမေးခွန်းများကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပါးစပ်ဖြင့်အကဲဖြတ်မှုတင်ပြသည့်အခါ၎င်းသည်မှတ်မိရန်ခက်ခဲသောအချက်များအတွက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားမဟာဗျူဟာသတင်းအချက်အလက်ငွေ့ရည်ဖွဲ့နည်းလမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အသုံးပြုတယ် တိုတောင်းသောမှတ်စုများနှင့်သော့ချက်စာလုံးများ ခေါင်းစဉ်၏အရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်မှာတင်ပြသတင်းအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်နိုင်စေခြင်းငှါ။ ၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်မူလတန်းပညာရေး၏ပထမနှစ်များတွင်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားများသောအားဖြင့်သင်ကြားပေးသည်။ အရာသည်ပုံရိပ်များနှင့်အယူအဆများကိုဆက်စပ်နိုင်ပြီးအမြင်အာရုံအကျဉ်းချုပ်ကိုခံယူရန်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအားပေးသည်။
အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုမိုထိရောက်စွာသင်ယူသောလူများလည်းရှိသည် အမြင်အာရုံလေ့လာမှု tools များသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင်မြေပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအလွတ်ကျက်ရန်နည်းလမ်းများလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသားအားရရှိသောလေ့လာမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဖန်တီးထားသောပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်နေစဉ်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောပုံရိပ်များဖြင့်၎င်းတို့ကိုဖန်တီးရမည်။ ဤနည်းဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာလေ့လာခဲ့သောအရာကိုမှတ်မိလိမ့်မည်။
စိတ်ကူးများကိုပုံများဖြင့်ပုံဖော်နိုင်သည် ကိုယ်စားပြုမှု, တူညီ, semantic ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အခမဲ့အသင်းအဖွဲ့အားဖြင့်.
ကိုယ်စားပြုခြင်းသည်မကြာခဏပြောသောအရာများကို ဦး နှောက်ကဲ့သို့ဆွဲရန်အသုံးပြုသည်။
တူညီမှုကိုယင်း၏တစိတ်တပိုင်းအားပုံမှန်အားဖြင့်တူညီသောစကားလုံးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာရေးသားထားသောအသုံးအနှုန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ကိရိယာကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါဥပမာအားဖြင့်ကြွက် (တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်) ကိုဆွဲပါ။
အနက်ရောင် - အစိမ်း - အနီရောင်နည်းလမ်း
ဒါဟာတစျဦးဖွစျသညျ လေ့လာနည်းစနစ်များ ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များကိုကိုယ်စားပြုရန်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင် underlining သောစမ်းသပ်မှုမဟာဗျူဟာအပေါ်အခြေခံပြီး။ အနက်ရောင်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေအတွက်၊ အနီရောင်ဆိုတာငါတို့သိရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ၊ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှတ်မိဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အရာတွေကိုထောက်ပြဖို့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
စာသားကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်ထိရောက်သောလေ့လာမှုနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် လေ့လာနည်းဗျူဟာများ ဒါကမင်းလေ့လာချင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုနားလည်စေလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့အနက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်စာပိုဒ်ဖတ်ခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်း၊ မှတ်မိခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာဖတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤဒေသတွင်ဗဟုသုတရှိပါကသင်ယူရန်နှင့်အသိအမှတ်ပြုရန်ဘာသာရပ်အကြောင်းလေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အကြောင်းအရာ၏ခေါင်းစဉ်များနှင့်ခေါင်းစဉ်ခွဲများကိုဖတ်ရန်လုံလောက်ပေသည်။ သူတို့တစ်ခုချင်းစီကိုအောက်ပါပထမ ဦး ဆုံးအပိုဒ်ကိုဖတ်ရှုဖို့တိုးချဲ့နိုင်ဖြစ်ခြင်း။
စာပိုဒ်ဖြင့်ဖတ်ခြင်းသည်အဓိကနှင့်ဒုတိယစကားလုံးများနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအခွင့်အရေးပေးသည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ရာစကားလုံးများ၏အမှတ်အသားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုသုံးနိုင်သည် အလေးပေးအမျိုးအစားများ။
အဆိုပါကိုယ်စားပြုမှုကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ပြီးသမျှကိုသိမ်းသွင်းဖို့ခွင့်ပြု; ၎င်းသည်အကျဉ်းချုပ်သို့မဟုတ်အဓိကသဘောတရားများနှင့်အတူအသေးစိတ်ပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လူသိများသော Concept Map ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာဖတ်ထားသောအရာများကိုမှတ်မိနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဦး စားပေးသည့်အလတ်စား (စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နှုတ်ဖြင့်) ဖြင့်ရှင်းပြရမည်။
နောက်ဆုံးအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ရာများကိုမှတ်မိရန်ခွင့်ပြုပေးသောအရာဖြစ်သည်။ တိကျသောအခြေအနေများတွင်ဖော်ပြထားသောဗဟုသုတများကိုကယ်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ရဲ့ဗဟုသုတကိုချဲ့ထွင်နိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါလေ့လာမှုနည်းလမ်းများကိုရှင်းပြပြီးတာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အသုံးများဆုံးလေ့လာမှုနည်းစနစ်တစ်ခုစီ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုတိုးချဲ့သွားမည်။ မှတ်စုများ၊ အညွှန်းကဒ်များ၊ စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးမြေပုံများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေorိသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများ၊.
မျဉ်းသား technique ကို
မျဉ်းကြောင်းရည်ရွယ်သည် စာသား၏အဓိကသို့မဟုတ်အဓိကစိတ်ကူးများကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျောင်းသားသည်သူတို့လေ့လာခဲ့ရာများကိုမှတ်သားထားသည့်အရာကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်သာမှတ်မိနိုင်သည်။ မျဉ်းသားစေရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးစာသားကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်နှင့်အဘယ်အရာကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်ကြောင်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ဤအတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်သော့ချက်စာလုံးများအောက်တွင်လိုင်းများဆွဲရန်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်မည်သည့်ခဲတံနှစ်ခုလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။
လေ့လာရမည့်အကြောင်းအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသည်နှင့်မှတ်စုများကိုစာသားအတွင်းရှိသို့မဟုတ်မှတ်မိရန်ခက်ခဲသည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူဖန်တီးနိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်လူသိများသောကဒ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ ယင်းတို့ကို“ ကဒ်များ” ဟူသောအမည်ကိုရည်ညွှန်းပြီးကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့သည်။
ခေါင်းစဉ်နှင့်ငါတို့ပေါ်မူတည်။ သင်ယူမှုစွမ်းရည် (အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူသောလူများရှိကြောင်းသတိရပါ။ ) စိတ်ကိုသို့မဟုတ်အယူအဆဆိုင်ရာမြေပုံများဖြင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုကပုံရိပ်များနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုလေ့လာရမည့်အချက်အလက်များနှင့်ဆက်စပ်ရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။ ဒုတိယသည်အယူအဆများနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ပြန်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုနေစဉ်။ ဤနည်းလမ်းသည်မျဉ်းကြောင်းနှင့်အတူကျောင်း၌ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောပထမဆုံးလေ့လာမှုနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်မှုများသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများကိုသူတို့၏ထင်ရှားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်မတူညီသောနယ်ပယ်များရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတကိုအကဲဖြတ်ရန်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသည့်လေ့လာမှုမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့စာမေးပွဲတွေပါတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်၊ ငါတို့ရဲ့ဗဟုသုတကိုစမ်းဖို့လည်းအင်တာနက်မှာရှာဖွေနိုင်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုဖန်တီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြင်ပမှအကူအညီတောင်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်လူသိနည်းသောလေ့လာမှုနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနည်းလမ်းကအကြောင်းအရာတခုအပေါ်မှာစိတ်ကူးသစ်တွေကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့အုပ်စုဖွဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ လူများစွာပါဝင်သောကြောင့်များစွာသောအတွေးအခေါ်များကိုများသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်တွေ့ရှိရသော်လည်းအဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ အရာသည်သင်ယူမှုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုပြီးအကဲဖြတ်ချိန်တွင်ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင်သည်ဝေဖန်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်၊ အတွေးအမြင်အားလုံးကိုချရေးရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုရန်၊ စိတ်ကူးများကိုတတ်နိုင်သမျှများများရှာဖွေရန်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်သို့မဟုတ်တိုးတက်ရန်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်ပျှမ်းမျှအထက်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်မရှိကြသောသူများအတွက်လေ့လာမှုပြုသည့်နည်းစနစ်များသည်အခြေခံကျသောကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အားသာချက်တစ်ခုအနေနှင့်လည်းအနာဂတ်တွင်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၊ စာသားများကို“ စာလုံး” ကိုလေ့လာခြင်းကိုအလွယ်တကူမေ့သွားတတ်သည်။ ယခုမှ စ၍ သင်ရှင်းပြသောနည်းလမ်းအချို့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးလေ့လာမှုသည်သင့်အတွက်များစွာပိုမိုလွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » ပညာရေး » သင်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လေ့လာနည်းစနစ်
juse danielsd ဟုသူကပြောသည်
juse danielsd သို့ပြန်သွားရန်